Mitemo Nemamiriro - CashCounterMachines.com
Aya anotevera ndima anotsanangura yedu Mitemo & Mamiriro, Mitemo Yekutengesa:
Parizvino, tinogamuchira VISA, MasterCard, AMEX & Discover. Yako odha inotumirwa mushure mekubhadhara kwabviswa.
Isu parizvino tinopa 1 nzira yekutumira.
- UPS Pasi kana kuti Fedex Ground (5-7 Business Days)
Mirairo inogadziriswa mukati mezuva 1-3 bhizinesi kunze kwekunge chigadzirwa chakarairwa chiri pa backorder.
Zvinhu zvekuseri zvekuseri zvinotumirwa otomatiki kana zviripo. (Kazhinji 4 - 6 mazuva ebhizinesi)
Return Policy: INOKOSHA: Please Read Usati Waodha.
Zvese zvigadzirwa zvedu zvichave inishuwarenzi yekutakura.
Ndokumbira utarise bhokisi rekutakura uye chigadzirwa, nekukurumidza tizivisa isu nekambani yekuendesa kana paine chero kukuvara kwaitwa kuchigadzirwa.
Hapana kudzorerwa ichagadzirirwa zvigadzirwa zvinoshandiswa kana zvisiri mukugadzirisa zvakare kana kukuvadzwa mamiriro pakutumira uye zvinozotemwa chete nesu kana bato redu rechitatu rakasarudzwa kana kambani yekutumira.
Kutumira hakudzoserwe. Iwe haugamuchire kiredhiti nekutakura uye kubata muripo pane zvakadzoserwa zvigadzirwa.
Returns inofanira kuitwa mukati 30 mazuva yekugamuchira zvinotengeswa.
Mari yekudzoreredza inosvika makumi matatu muzana inogona kunyorera pakutengesa kwakadzoserwa.
Zvinotengeswa zvinofanirwa kudzoserwa mukati mamiriro akafanana iyo iyo yawakatumirwa kwauri.
Tinogamuchira Merchandise Dzokera kune CHETE Chakaremara chinhu (zvinhu) izvo zvisingagadzirike kana kutsiviwa; Zvikasadaro, Zvese zvekutengesa ndezvekupedzisira.
Mutengi achava kuchajwa 30% yemutengo wechinhu sekurongedzazve & muripo wekubata kana chero chinhu chekudzoka (s) chichiita sechisina kukanganisa izvo zvinongotemwa nehunyanzvi hwedu kana wechitatu bato pakudzoka. Zvese Zvinhu zvedu zvakaodha yakakosha, Hapana kudzoka kune yakakosha odha zvinhu uye zvakatsanangurwa. Mutengi ane basa rekutakura / kubata mari yekutumira chinhu kwatiri kana kudzoka kuchitenderwa nesu. Isu hatidzosere mari yekutumira & Yekubata mutengo, pekugara pekugara, uye zvimwe zvinoshanda zvinodhura vanobatana nekutenga chero mamiriro.
Kana chero odhiyo ikaiswa nekuda kwekukanganisa / kusanzwisisa kana chero kukanzurwa, kudzosa kutumira kuri pasi 30% kurongedza zvakare & kubata mahara pamwe nekuderedzwa kwemutengo wekutumira nzira mbiri. Iyo yakaderedzwa mari ichagadziriswa kubva kune yako refund cheki. Hapana kusarudzika kuchaitwa.
Isu tinotendera kuti chinhu chako chiendeswe mumhando nyowani & yakazara mamiriro ekushanda. Fekitori rakaremara zvigadzirwa / zvikamu zvinovhara zvigadzirwa zvemugadziri zvikamu uye isu, CashCounterMachines.com, tinochengetera kodzero yekugadzirisa, kutsiva, kana kuchinjanisa chakashomeka chikamu / chinhu (s) mukati meyakavimbiso nguva.
Zvese zvakatenderwa kudzoka zvigadzirwa zvinofanirwa kunge zviri mubhokisi rekutanga, zvakarongedzwa zvakanaka, zvinogoneka uye zvinofanirwa kusanganisira zvese zvinotumirwa nechigadzirwa. Unozobhadhariswa zvinhu zvisipo.
Zvese zvigadzirwa zvekudzoka zvinofanirwa kuperekedzwa neRMA (Return Merchandise Authorization) nhamba inozopihwa nesu panguva yekubvumidzwa. Kudzoka kunofanirwa kuitwa mukati 10 mazuva kubva pakuburitsa RMA# nesu. Hapana COD inodzoka uye isina RMA # Kudzoka ichagamuchirwa uye ichakutumira zvakare kwauri nemutengo wako kana iwe uchachajwa 30% sekurongedzazve & muripo wekubata.
Kune ese anotenderwa zvinhu zvekudzosa, tichakubhadharira kukadhi rako rechikwereti kana kukutumira cheki yekudzosera mari mukati 30 mazuva zvekudzorera zvinhu kwatiri sekutungamira kwedu.
Raira Kanzura Mutemo:
Kanzura odha mukati memaawa makumi maviri nemana.
Kamwe odhita yatumirwa, haigone kukanzurwa.
Special Order Zvinhu hazvigone kukanzurwa kana zvangoiswa neanopa.
Isu tine kodzero yekukanzura chero odha chero nguva.
Mitengo inogona kuchinja pasina ziviso.